Yakanakisa Yakasimba Simba inosunga Epoxy Adhesive Invented Cone Anchor Bolt Mugadziri uye Fekitori | Kuchenjera
Yakachinjika koni chinamira inogona kushandiswa kune iyo kunamira kwekongiri uye ekunze madziro akaumbwa zvikamu. Inogona kuburitsa anchoring mhedzisiro yakafanana neiyo yemakaniki kukiya mushure mekusungirirwa kwayakasimbiswa painoshandiswa nejekiseni-rudzi rwechibatiso chinamatira.
Seimwe bazi remakemikari anchor, inverted koni-yakaita makemikari anchor ane akasiyana maficha ekushandisa, uye anonyanya kushandiswa kumisikidza pakati pekongiri uye zvakasungirirwa zvinhu mumapurogiramu ekumusoro-kumagumo. Mamwe mapurovhinzi akaburitsa mirau inokodzera yekurambidza zvakanyanya kushandiswa kweanosimbisa makemikari akasimba pamadziro emaketeni.
Iyo yekumashure-yakadzika midzi yeiyo chivakwa keteni madziro ichave akavakirwa pane dhizaini zvinodiwa kuti usarudze yakavimbika anchor mabhaudhi senge kumashure-akacheka (akawedzeredzwa) ezasi mechineti anchor bhaudhi uye yakamisikidzwa kemikari anchor bhaudhi, uye yakajairika kemikari anchor bhaudhi inofanira kwete kushandiswa. Paunenge uchishandisa zvimisikidzo zvakaomarara, mutengesi anozopa yakakwira tembiricha yekudzivirira bvunzo mushumo wemakemikari anotsigira
Izvi zvataurwa pamusoro apa Chinyorwa 4.6 cheZhejiang's kuvaka keteni rusvingo kuchengetedzwa kwehunyanzvi zvinodiwa. Sezvo nguva inopfuura, mamwe mapurovhinzi anokwanisa kuunza marongero akakodzera.
Muchokwadi, matanho ekuvaka eiyo yepamusoro-simba kemikari anchor ari nyore, ingoishandisa iyo hosipaipi. Iyo inverted cone anchor inoda kushandiswa pamwe chete neyakagadziridzwa epoxy jekiseni-mhando yekudyara glue. Inopfuura hafu yezvigadzirwa zverabha zvekugadzira rabha haigone kugadzirisa dambudziko rejekiseni-rekudyara guruu rinodonhedza guruu, izvo zvinogona kukonzeresa kuti zvinhu zviviri zvisanganiswe zvakafanana uye zvinokanganisa mashandiro eglue yekudyara. Ehe, iyo yega pachayo ine inoenderana zvivakwa. A Kuitwa kwegiredhi glue zvakare kwakanaka kana kushata.
Matanho ekuvaka eakachinjika koni kemikari anchor anotevera:
(1) Punch maburi eanoenderana dhayamita nekudzika zvinoenderana nechigadzirwa bhuku.
(2) Shandisa chin'ai blower kuwiriranisa maburi uye kufuridza soot kanopfuura ka2;
(3) Shandisa bhurasho kuchenesa guruva pamadziro egomba kanopfuura ka2;
(4) Wobva washandisa sipo blower kufuridza masosi pane chinzvimbo chegomba kusvika pasisina guruva rinopfachukira mugomba;
(5) Jekiseni rakachinjwa epoxy-mhando yekudyara bhaa glue;
(6) Screw mune inverted koni mhando kemikari anchor bhaudhi.
Pashure: UK Prudential Kongiri Inonamatira Yekunamatira Glu Yekuomesa Fastener System 450ml
Zvadaro: Yakangwara-Chechitatu Chizvarwa Undercut Anchor